Kal-fadhiga 4aad Ee Baarlamaanka Hirshabeelle Oo Maanta Furmaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa maanta lagu wadaa in Magaalada Jowhar ee Caasimada dowlad Goboleedka Hirshabeelle uu ka furmo kal-fadhiga 4aad ee Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulkaas.
Xaflada Furitaanka Kal-fadhiga 4aad ee Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa hada waxa ay ka socotaa Howlka ay ku Shiraan Xildhibaanada,iyadoona Magaalada Jowhar ay ku sii jeedaan wafuud Caalami ah.
Waxaa sidoo kale lagu wadaa maanta in uu Magaalada Jowhar dib ugu laabto Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo bilooyinkii dambe ka maqnaa Jowhar.
Sheekh Cusmaan Barre oo ah Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle iyo wafdi Xildhibaano ah ayaa shalay gaaray Magaalada Jowhar ee Caasimada dowlad Goboleedka Hirshabeelle .
Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ay ku maqnaayeen Fasax, waxaana mudadii ay fasaxnaayeen Al Shabaab Weerar ku dilay labo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle kuwaa oo lagu kala Magacaabi jiray Allaha u Naxariistee Ismaaciil Muumin Hilowle iyo Sheekh Daahir Muqtaar.